November, 2017 | Otu Di na Nwunye
November 30, 2017 + Arts & Music, Europe, History, Italy, Nhazi njem
Njem njem Rome na Florence
Otu n'ime ihe ukwu banyere ileta Rom bụ nbịaru nso na ebe ndị ọzọ na-achọsi ike na ndepụta ịwụ gị, dị ka Florence. N'eziokwu, ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị nchebe na Rom, njem otu ụbọchị site na Rome gaa Florence nwere ike ịnweta ngwa ngwa. Anyị ga-egosi gị otu esi mee ya! Ihe mere i ji kwesị ịga Florence Florence, akụkọ ihe mere eme, nkà, na azụmahịa ... GỤKWUO
November 26, 2017 + England, Europe, Njem Ezinụlọ, Ebe nkiri ebe nkiri
Ogige iri na ị ga-ahụ na London, England
Mgbe mmadụ na-eche na ị ga-aga London, ọ na-adịkarị mfe itinye atụmatụ gị gburugburu brik na mgbochi nke obodo ahụ - ụlọ ihe ngosi nka, pubs, ụlọ ngosi Victoria, na ụlọ ọrụ gọọmentị nke narị afọ gara aga. Ma na mpụga nkume na brik nke mejupụtara obodo ahụ, e nwere ihe ọzọ na-eme London ka ọ ghaghị ịhụ. Ogige ntụrụndụ. N'ezie, London bu onye a gọziri agọzi nke ukwuu na ... GỤKWUO
Mba ndi ozo di nchebe n'Afrika Maka ndi njem
Oge na-agbanwe, nke pụtara njem pụkwara, ụfọdụ ebe ị na-achọghị ịga njem ugbu a bụ mba ndị kasị dịrị nchebe n'Africa maka ndị njem nleta. Ozugbo mba dị iche iche dị n'okpuru ọchịchị nchịkwa, ọtụtụ mba na-atachi obi na esemokwu obodo, Africa anaghị anọ na radar maka ndị njem. Otú ọ dị, nke ahụ agbanweela ma ọ gaghị esi ike ịchọta ... GỤKWUO
November 13, 2017 + Asia, Njem njem, Japan, omenala